ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစားသတင်းများ - SPORTS MYANMAR
By Edi Tor June 28, 2019
PSG အသင်း ဟာ နေမာ ကို သူတို့ ခေါ်ယူ ခဲ့စဉ် က ယူရို ၂၂၂ သန်း ပြန်လည် ရရှိ ပါက ထွက်ခွာ ခွင့်ပြု မယ် လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
အေစီမီလန် အသင်း ဟာ ရီးရဲ မက်ဒရစ် နောက်ခံလူ သီယို ဟာနန်ဒက် ကို ခေါ်ယူ ဖို့ သဘောတူ ညီချက် ရရှိ သွားခဲ့ ပြီဖြစ်တယ် လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး အသင်း ကွင်းလယ်လူ နာဘီ ကီတာ ဟာ ကြံ့ခိုင်မှု မပြည့်ဝ တာောကာင့် အာဖရိက ဖလား အုပ်စု ပွဲ စဉ် ကို လွဲချော် မယ် လို့ ဂီနီယာ အသင်း ဘက်က အတည်ပြု သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ် မှုး ဟောင်း ၀ိန်းရွန်းနီ က တော့ သူ ဟာ နည်းပြ လောက ထဲ ကို ၀င်ရောက် နိုင်ဖို့ အတွက် စတင်လေ့လာ နေပါပြီ လို့ ပြောဆိုသွား ခဲ့ ပါတယ် ။
ပဲလေ့စ် အသင်း တောင်ပံ ကစား သမား ၀ီလ် ဖရိုက် ဇာဟာ ဟာ အသင်း ကနေ ထွက်ခွာ ဖို့ အတွက် တောင်းဆို မှု ပြုလုပ် လာခဲ့တယ် လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်း ကတော့ အငှား ထွက် ကစား နေတဲ့ အင်တာ မီလန် အသင်း တိုက်စစ်မှုး ကီတာ ဘယ်ဒီ ကို စုံစမ်းမှု ပြုလုပ် နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ခေါင်းဆောင် ဟောင်း အန်တို နီယို ဗလင် စီယာ က တော့ အသင်း ကနေ ထွက်ခွာ အပြီး မှာ အီကွေဒေါ ကလပ် ကွီတို အသင်း ဆီကို ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ ပြီ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဆဲလ်တစ် အသင်း ဟာ ပြင်သစ် ကလပ် တူးလောက်စ် အသင်း ရဲ့ ခံစစ် သမား ခရစ်စတိုဖာ ဂျူလီယန် ကို ပေါင် ၇ သန်း ဖြင့် ခေါ်ယူ လိုက်နိုင်ပြီ လို့ သိရ ပါတယ် ။
လက်စတာ စီးတီး အသင်း ဟာ လူတန်တောင်း အသင်း ရဲ့ ညာ နောက်ခံလူ ဂျိမ်းစ် ဂျပ်စတင် ကို ပေါင် ၆ သန်း + အပို ဆုကြေး ဖြင့် ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ အလား အလာ ကောင်း သွားပြီ လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးရှား ဟာ လာမယ့် အပတ် မှာ စတင် မယ့် ရာသီကြို ခြေစမ်းပွဲ တွေ မတိုင်မီ နောက်ထပ် ခေါ်ယူမှု တစ်ခု ကို အပြီး သတ်နိုင် ဖို့ မျှော်လင့် နေတယ် လို့ လည်း သိရ ပါတယ် ။
Manchester United’s Norwegian manager Ole Gunnar Solskjaer (R) puts an arm around Manchester United’s English defender Ashley Young (L) at the end of the English Premier League football match between Manchester United and Chelsea at Old Trafford in Manchester, north west England, on April 28, 2019. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
လွန် ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ် တုန်းက ယှဉ်ပြိုင် ကစား ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ ဖလား ပြိုင်ပွဲ မှာ ရုရှ အသင်း ဟာ ကင်မရွန်း အသင်း ကို ၆ – ၁ ရလဒ် နဲ့ အပြတ် အသတ် အနိုင် ရခဲ့ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ပွဲမှာ ရုရှ ကစား သမား ဆာလန်ကို ဟာ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ ဖလား ပြိုင်ပွဲ သမိုင်း တစ်လျောက် တစ်ပွဲ တည်း ၅ ဂိုး သွင်းယူနိုင် တဲ့ ပထမဆုံး ကစား သမား ဖြစ်လာခဲ့ သလို ကင်မရွန်း ဘက်က ရော်ဂျာ မီလာ ဟာလည်း အသက် ၄၂ နှစ် နဲ့ ကမ္ဘာ့ ဖလား သမိုင်း တစ်လျောက် အသက်အကြီး ဆုံး ဂိုးသွင်းသူ ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ယနေ့ အတှကျ နောကျဆုံးရ အားကစားသတငျးမြား
PSG အသငျး ဟာ နမော ကို သူတို့ ချေါယူ ခဲ့စဉျ က ယူရို ၂၂၂ သနျး ပွနျလညျ ရရှိ ပါက ထှကျခှာ ခှငျ့ပွု မယျ လို့ သတငျး ကွားသိရ ပါတယျ ။
အစေီမီလနျ အသငျး ဟာ ရီးရဲ မကျဒရဈ နောကျခံလူ သီယို ဟာနနျဒကျ ကို ချေါယူ ဖို့ သဘောတူ ညီခကျြ ရရှိ သှားခဲ့ ပွီဖွဈတယျ လို့ သတငျး ကွားသိရ ပါတယျ ။
လီဗာပူး အသငျး ကှငျးလယျလူ နာဘီ ကီတာ ဟာ ကွံ့ခိုငျမှု မပွညျ့ဝ တာောကာငျ့ အာဖရိက ဖလား အုပျစု ပှဲ စဉျ ကို လှဲခြျော မယျ လို့ ဂီနီယာ အသငျး ဘကျက အတညျပွု သှားခဲ့ ပါတယျ ။
မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈ မှုး ဟောငျး ၀ိနျးရှနျးနီ က တော့ သူ ဟာ နညျးပွ လောက ထဲ ကို ၀ငျရောကျ နိုငျဖို့ အတှကျ စတငျလလေ့ာ နပေါပွီ လို့ ပွောဆိုသှား ခဲ့ ပါတယျ ။
ပဲလစျေ့ အသငျး တောငျပံ ကစား သမား ၀ီလျ ဖရိုကျ ဇာဟာ ဟာ အသငျး ကနေ ထှကျခှာ ဖို့ အတှကျ တောငျးဆို မှု ပွုလုပျ လာခဲ့တယျ လို့ သတငျး ထှကျပျေါ လာခဲ့ ပါတယျ ။
အာဆငျနယျ အသငျး ကတော့ အငှား ထှကျ ကစား နတေဲ့ အငျတာ မီလနျ အသငျး တိုကျစဈမှုး ကီတာ ဘယျဒီ ကို စုံစမျးမှု ပွုလုပျ နတေယျ လို့ သိရ ပါတယျ ။
မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ခေါငျးဆောငျ ဟောငျး အနျတို နီယို ဗလငျ စီယာ က တော့ အသငျး ကနေ ထှကျခှာ အပွီး မှာ အီကှဒေေါ ကလပျ ကှီတို အသငျး ဆီကို ပွောငျးရှေ့ သှားခဲ့ ပွီ ဖွဈ ပါတယျ ။
ဆဲလျတဈ အသငျး ဟာ ပွငျသဈ ကလပျ တူးလောကျဈ အသငျး ရဲ့ ခံစဈ သမား ခရဈစတိုဖာ ဂြူလီယနျ ကို ပေါငျ ရ သနျး ဖွငျ့ ချေါယူ လိုကျနိုငျပွီ လို့ သိရ ပါတယျ ။
လကျစတာ စီးတီး အသငျး ဟာ လူတနျတောငျး အသငျး ရဲ့ ညာ နောကျခံလူ ဂြိမျးဈ ဂပျြစတငျ ကို ပေါငျ ၆ သနျး + အပို ဆုကွေး ဖွငျ့ ချေါယူ နိုငျဖို့ အလား အလာ ကောငျး သှားပွီ လို့ ကွားသိရ ပါတယျ ။
ယူနိုကျတကျ နညျးပွ ဆိုးရှား ဟာ လာမယျ့ အပတျ မှာ စတငျ မယျ့ ရာသီကွို ခွစေမျးပှဲ တှေ မတိုငျမီ နောကျထပျ ချေါယူမှု တဈခု ကို အပွီး သတျနိုငျ ဖို့ မြှျောလငျ့ နတေယျ လို့ လညျး သိရ ပါတယျ ။
လှနျ ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှဈ တုနျးက ယှဉျပွိုငျ ကစား ခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့ ဖလား ပွိုငျပှဲ မှာ ရုရှ အသငျး ဟာ ကငျမရှနျး အသငျး ကို ၆ – ၁ ရလဒျ နဲ့ အပွတျ အသတျ အနိုငျ ရခဲ့ ပါတယျ ။ အဆိုပါ ပှဲမှာ ရုရှ ကစား သမား ဆာလနျကို ဟာ ဖီဖာ ကမ်ဘာ့ ဖလား ပွိုငျပှဲ သမိုငျး တဈလြောကျ တဈပှဲ တညျး ၅ ဂိုး သှငျးယူနိုငျ တဲ့ ပထမဆုံး ကစား သမား ဖွဈလာခဲ့ သလို ကငျမရှနျး ဘကျက ရျောဂြာ မီလာ ဟာလညျး အသကျ ၄၂ နှဈ နဲ့ ကမ်ဘာ့ ဖလား သမိုငျး တဈလြောကျ အသကျအကွီး ဆုံး ဂိုးသှငျးသူ ဖွဈလာခဲ့ ပါတယျ ။